Politics | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Using religion for political gains is prohibited in the constitution
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၁ (ဇ)
နိုင်ငံရေးကိစ္စအတွက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု၍ ဆန္ဒမဲပေးရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒမဲ မပေးရန်သော်လည်းကောင်း ပြောဆိုခြင်း၊ ဟောပြောခြင်း၊ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း နှင့် ယင်းသို့ ပြုလုပ်ရန် အားပေးလှုံ့ ဆော်ခြင်းပြု သူ သို့မဟုတ် ယင်းသို့ပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်သူ၊ (ငြိစွန်းလျှင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိသူစာရင်းဝင်မည်)
Tags:Constitution, Politics, Religion, Separation of church and state
IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC
IF FAIL TO ARREST WIRATHU, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED by ICC.
IF FAIL TO ARREST The Director of the President’s Office Hmuu Zaw, PRESIDENT U THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
IF FAIL TO ARREST The Voice Weekly Editors and Publishers, THEIN SEIN MUST BE ARRESTED and tried at ICC.
Maung Khin added6photos.
ကျွန်ပ်တို့မြန်မာပြည်တွင် အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ပုဒ်မ ၅၀၅၏ အထူးကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်၊ကောလဟာလများကို ပျော်ပျော်ကြီး ကျူးလွန်နေမူ့များ။………………………………….
ပုဒ်မ ၅၀၅ – အများပြည်သူ၏ အကျိုးပျက်စီးစေမူ့ကို ဖြစ်သောဖေါ်ပြချက်။
Statements conducing to public mischief (Section -505)
မည်သူမဆို ဖေါ်ပြချက်ကိုဖြစ်စေ၊ကောလဟာလကိုဖြစ်စေ၊ သတင်းပြုရာတွင် သို့တည်းမဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာရာတွင်၊သို့တည်းမဟုတ် ဖြန့်ချိရာတွင်-
(ဂ) လူအမျိုအစားအချင်ချင်းဖြစ်စေ၊လူမျိုးစုအချင်းချင်းဖြစ်စေ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပြစ်မှူကျူးလွန်အောင် လှူံ့ဆော်ရန်အကြံရှိလျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါလှူံ့ဆော်ခြင်းကို ဖြစ်တန်ရာသည့်အကြောင်းရှိလျှင်၊ ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။
Tags:Asia, Aung San, Aung SanSuu Kyi, Burma, Maung Khin, Myanmar, Politics, United States
Tags:Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Facebook, Graffiti, Meiktila, Muslim, Politics
မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ
Tags:Asia, Bagan, Burma, History, Myanmar, Politics